Mpanamboatra sy mpamatsy ny tsiro amin'ny varotra PET | Copak
Shanghai COPAK Industry Co., LTD, natsangana tamin'ny 2010, miaraka amin'ny biraon'ny varotra any Shanghai sy ny orinasa any Zhejiang. COPAK dia voalohany natsangana ho mpamatsy kitapo plastika sy sarimihetsika fonosana sakafo. Tamin'ny 2015, nanomboka ny orinasan-tsakafon'ny PET sy tavoahangy PET izahay.
Amin'ny maha mpamatsy za-draharaha anao dia hihaino anao i Copak, hanome sosokevitra arak'asa ary hitondra tombony bebe kokoa aminao. Ny kalitao no fotony, ny mpanjifa no fotokevitra. Copak dia mandray ny kalitao sy ny serivisy ho fiainana hatrany, manome ny vokatra tsara ary ny serivisy mitsinjo tsara amin'ny fony manontolo.
Amin'ny maha mpamatsy andraikitra ara-tsosialy azy, Copak dia tompon'andraikitra amin'ny fanalefahana ny tsindry asa, mandrisika ny mety ho mpiasa, ary mandray anjara amin'ny fiaraha-monina. Miaraka amin'ny hetsika tena azo ampiharina, mikendry ny hahatsapa ny fampiraisana mirindra ny orinasa, ny mpiasa ary ny fiaraha-monina izahay.
NY Kaopy fanandramana PET dia ampiasaina amin'ny fanandramana sakafo. Ampiasaina any amin'ny fivarotana, fivarotana lehibe, bara ary toerana hafa ho an'ny mpanjifa yogourt, ranom-boankazo, zava-pisotro, gilasy, voasarimakirana, kafe, ronono ary mampiroborobo izany. Ny endriny mazava tsara sy mazava ary maivana nefa maharitra dia haneho manam-pahaizana amin'ny gilasy amin'ny zava-pisotro tianao rehetra. Ireto karazan-trondro ireto dia tsara ho an'ny soda, labiera, divay, zava-pisotro mifangaro, rano, sns.
Ny famolavolana shatterproof dia manolotra fampiasana mora vidy indrindra hisorohana ny fivoahan'ny rano sy ny fiparitahan'ny haben'ny tranga mitahiry habakabaka dia manome vahaolana fonosana mahomby ho an'ny orinasa Lavorary ho an'ny efitrano fandraisam-bahiny, faritra fandraisana ary bebe kokoa Ampiasaina amin'ny fihinanana zava-pisotro mangatsiaka.
Ny sasany malaza indrindra Kaopy fanandramana PET antsipiriany etsy ambany. Ankoatr'ireo habe ireo dia manana boky sy habe ary endrika hafa koa izahay. Alefaso fotsiny aminay ny zavatra takinao, hovaliana faran'izay haingana ny fanontanianao.
ANDRIAMANITRA FITSABOANA NY PET
Ahoana no hividianana ny MIASA TSARA NY PET?
Alefaso aminay ny fanontanianao, ny vidiny voatanisa, ny PI natao, ny fandoavam-bola, ny fanombohana, ny fanontana, ny fanaraha-maso alohan'ny fonosana, ny fandoavam-bola. Nalefa.
Teo aloha: Saron'ny Cup Cup
Manaraka: Kaopy plastika 12oz
Kapoaka plastika azo ampiasaina
Clear Cup Cup
Kaopy gilasy PET